CHEFURU PASWỌỌDỤ AKAỤNTỤ MICROSOFT GỊ - IHE Ị GA-EME? - WINDOWS - 2019
Chefuru paswọọdụ akaụntụ Microsoft gị - ihe ị ga-eme?
Ọ bụrụ na ichefuru paswọọdụ akaụntụ Microsoft gị na ekwentị gị, na Windows 10, ma ọ bụ na ngwaọrụ ọzọ (dịka ọmụmaatụ, XBOX), ọ dịtụ mfe igbakeghachi (nrụpụta) ma nọgide na-eji ngwaọrụ gị na akaụntụ ochie gị.
Ntuziaka a ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu esi eweghachite paswọọdụ Microsoft na ekwentị gị ma ọ bụ kọmputa, nke chọrọ ụfọdụ nuances nwere ike bara uru n'oge mgbake.
Usoro Ntughari nke Microsoft Microsoft
Ọ bụrụ na ị chefuola paswọọdụ nke akaụntụ Microsoft gị (ọ dịghị mkpa na ngwaọrụ - Nokia, kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ na Windows 10, ma ọ bụ ihe ọzọ), ọ bụrụ na ngwaọrụ a jikọọ na Ịntanetị, ụzọ kachasị mkpa iji weghachite / tọgharịa paswọọdụ bụ ihe ndị a.
Site na ngwaọrụ ọ bụla (ntụgharị, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na echefuru paswọọdụ na ekwentị ahụ, ma ịnwere kọmpụta na-adịghị ekpochi, ị nwere ike ime ya na ya) gaa na saịtị ọrụ aka weebụ //account.live.com/password/reset
Họrọ ihe mere ị ji weghachite paswọọdụ, dịka ọmụmaatụ, "Anaghị m echeta paswọọdụ m" wee pịa "Ọzọ."
Tinye nọmba ekwentị gị ma ọ bụ adreesị ozi-e metụtara na akaụntụ Microsoft gị (ya bụ na E-mail, nke bụ akaụntụ Microsoft gị).
Họrọ usoro nke inweta koodu nche (site na SMS ma ọ bụ adreesị ozi-e). Enwere ike inwe ụdị ntanye: ị pụghị ịgụ SMS na koodu ahụ, ebe ọ bụ na ekpochi ekwentị (ma ọ bụrụ na echezọ paswọọdụ na ya). Mana: enweghi ihe ọ bụla na-egbochi ka nwa oge azụ kaadị SIM na ekwentị ọzọ iji nweta koodu. Ọ bụrụ na ịnweghị ike inweta koodu ma ọ bụ site na SMS ma ọ bụ site na SMS, lee nzọụkwụ 7.
Tinye koodu nkwenye.
Debe paswọọdụ akaụntụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na i rutela nzọụkwụ a, e weghachila paswọọdụ ahụ ma a gaghị achọrọ nzọụkwụ ndị a.
Ọ bụrụ na n 'nzọụkwụ nke anọ ị nwere ike ịnye ma ọ bụ nọmba ekwentị ma ọ bụ adreesị ozi-e metụtara na akaụntụ Microsoft gị, họrọ "Enweghị m ozi a" ma tinye ozi ọ bụla ọzọ ị nwere ike ịnweta. Wee tinye koodu nkwenye ahụ nke na-abata na adreesị ozi-e.
Na-esote, ị ga-ejupụta n'ụdị nke ịchọrọ inye ọtụtụ ozi banyere onwe gị dịka o kwere mee, nke ga-ekwe ka ọrụ nkwado ahụ mara gị dị ka onye na-ejide akaụntụ.
Mgbe ị juputara, ị ga-echere (ihe ga-abata na adreesị ozi-e site na nke asaa), mgbe a ga-enyocha data ahụ: ị nwere ike nwetaghachi akaụntụ gị, ma ọ bụ ha nwere ike ịgọnahụ ya.
Mgbe ị gbanwere paswọọdụ nke akaụntụ Microsoft ahụ, ọ ga-agbanwe na ngwaọrụ ndị ọzọ na otu akaụntụ ahụ ejikọrọ na Ịntanetị. Dịka ọmụmaatụ, na-agbanwe paswọọdụ na kọmputa, ịnwere ike iso ya na ekwentị.
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịtọgharịa paswọọdụ akaụntụ Microsoft na kọmpụta ma ọ bụ laptọọpụ na Windows 10, a ga-eme otu nzọụkwụ ahụ na igodo mkpọchi nanị site na ịpị "Adịghị m echeta paswọọdụ" n'okpuru ntinye ntinye ntinye aka na ihuenyo mkpọchi ma na-aga na ibeghachị paswọọdụ.
Ọ bụrụ na ọ nweghị ụzọ mgbake na-enyere aka, mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịnweta akaụntụ Microsoft gị na-adịgide adịgide. Otú ọ dị, ịnweta ngwaọrụ nwere ike weghachite ma nwee akaụntụ ọzọ na ya.
Ịnweta kọmputa ma ọ bụ ekwentị na akaụntụ Microsoft echefuru echefu
Ọ bụrụ na i chefuola paswọọdụ nke akaụntụ Microsoft na ekwentị ma enweghi ike nweta ya, ị nwere ike ịtọgharịa ekwentị na ntọala ntọala ahụ wee mepụta akaụntụ ọhụrụ. Ịmegharị ekwentị dị iche iche na ntọala ụlọ ọrụ na-eme dị iche iche (enwere ike ịchọta na Ịntanetị), ma maka Nokia Lumia, ụzọ bụ nke a (a ga-ehichapụ data niile site na ekwentị):
Gbanyụọ ekwentị gị kpam kpam (ogologo jide bọtịnụ ike).
Pịa ma jigide bọtịnụ ike na olu dị iche iche ruo mgbe isi okwu na-egosi na ihuenyo.
Iji mee ya, pịa bọtịnụ: Mpị elu, Mpịakọta elu, bọtịnụ Ike, Mpịakọta nke ala iji tọgharịa.
Na Windows 10, ọ dị mfe ma data sitere na kọmputa ahụ agaghị apụ ebe ọ bụla:
Na "Olee otú iji tọgharịa ntụziaka nke Windows 10", jiri "Change password with the built-in Administrator account" ruo mgbe e nyere iwu akara na igodo mkpọchi.
Iji usoro iwu na-agba ọsọ, mepụta onye ọrụ ọhụrụ (lee otu esi emepụta onye ọrụ Windows 10) ma mee ka ọ bụrụ onye nchịkwa (akọwapụtara na ntụziaka ahụ).
Debanye n'okpuru akaụntụ ọhụrụ ahụ. E nwere ike ịchọta data njirimara (akwụkwọ, foto na vidiyo, faịlụ sitere na desktọọpụ) na akaụntụ Microsoft echefuru C: Ọrụ Old_userName.
Nke ahụ niile. Were okwu okwuntughe gị nke ọma, echefula ha, dee ha ma ọ bụrụ na nke a bụ ihe dị ezigbo mkpa.